राउटेनी युवती’लाई होटलमा ल’गेर भिडियो बनाउदै दु’र्व्य’व’हार गरेको भिडियो सार्वजनिक !! (भिडियो) – Khabar28media
राउटेनी युवती’लाई होटलमा ल’गेर भिडियो बनाउदै दु’र्व्य’व’हार गरेको भिडियो सार्वजनिक !! (भिडियो)
काठमाडौ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल युटुव, टिकटक र फेसबुकमा भाइरलनै भएका राउटे समुदायका युवतीहरु माथी दु र्ब्य व हार हु न था ले को छ । भिडियो, फोटो खिच्न भन्दै राउटे समुदायमा पुग्ने स्थानीय युवाहरुबाट राउटे युवती दु र्ब्य वहा रके सि का र भ ए का हुन । **भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्**
राउटे समुदायमा पुगेका युवाहरुले टिकट, भिडियो बनाउने भन्दै प्रलोभनमा पारेर राउटे युवतीहरु टाढा टाढा जंगल–होटलमा पु¥याएर दु र्ब्य वहा र ग र्ने ग रेको गु ना सो छ । मा दक प दा र्थको कु लतमा प रेको राउटे समुदायका युवतीहरु असुरक्षित बनेका छन् । स्थानीय दुई युवाले मा दक पर्दा सेवन गरी, उनीहरुलाई समेत मा दक प दा र्थ खु वा एर एक होटलमा दु र्ब्यव हार ग रेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाईरल भएको छ । आइतबार विहानै उक्त भिडियो फेसबुक, युटुव, टिकटकमा भाईरल भएको हो ।
पहिचान नखुलेका एक अधवैशे युवाले नि र्वस्त्र भएर होटलमा मा दक पदार्थ सेवन गरेकै तालमा राउटे युवतीलाई श्रीमति भन्दै सं वेदानशिल अं गहरुमा छामछुम पारेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । उनीहरुलाई सामुहिक रुपमा दुई जना पुरुषले मेरो गलफेन्ड, मेरो बुढि भन्दै सं वेदानशिल अंगहरुमा छुने र चलाउने गरेको भिडियो समेत बाहिर आएको छ । राउटे चेलीहरुलाई ती दुई पुरुषले ललाई, फकाई होटलमा लगेर मदिरा समेत खुवाएर लठ्ठ पारेको भिडियोमा प्रष्ट देखिन्छ । **भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्**
भिडियोमा देखिएको होटल मेहलकुनाकै र युवाहरु स्थानीय हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यस विषयमा यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले भने कुनै पनि जानकारी नभएको जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी नायव निरिक्षक ९डिएसपी० राम प्रसाद घर्तीमगरले यस बारेमा कुनै जानकारी प्राप्त नभएको र के रहेछ घटनाको अनुसन्धान हुने बताउनुभयो ।लेकबेशी नगरपालिकाको कल्याणमा बस्दै आएका राउटे समुदाय केही दिनअघि मात्रै गुर्भाकोट नगरपालिका वडा नं। ११ आँपसोती जनैघाटस्थित भेरी नदिमा बसाई सरेका थिए ।
भिडियो सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक भएपछि स्थानीय युवाहरुले तत्काल अनुसन्धान गरी कारवाहीको माग गर्दै सामाजिक सञ्जालबाट आ क्रो श पो खेका छन् । राउटे युवतीहरु माथीको दु र्बय वहार जघन्य अ पराध भएकाले तत्काल अनुन्धान गरी हदैसम्मको का रवा ही ग र्न मा ग गरिएको छ । ‘राउटे समुदायका युवातीहरुलाई भिडियो बनाउने प्रलोभनमा होटल सम्म पुराउने र होटलमा मा दक पदार्थ सेवन गराएर दु र्य व हार ग र्ने ग रेको गु नासो पटक पटक पहिले पनि आएको स्थानीयको भनाई छ । **भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्**
Previous Article Breaking:- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट यस्तो अध्यादेश जारी, अटेर गर्नेलाई कडा सजाय दिइने !!
Next Article फेरि भारत बाट आयो यस्ताे ड’रलाग्दो खबर, मोदी समेत रुन थाले : मन थामेर हेर्नुहोला !